घर फ्लफी पाल्तु जनावर धेरै कारखानों, एक बरु कठिन समस्या आइपर्दा एक योग्य पशु उपनाम चयन गर्न छ। सबै पछि, नाम, आफ्नो पाल्तु जनावर को प्रकृति विचार गर्नुपर्छ सुरिलो र एकै समयमा धेरै लामो छैन हुन। यो पनि बारेमा पनि सजिलै जिब्रो र चाँडै भण्डारण मा पल्टिने गर्न सम्भव हुनुपर्छ जो सानो मात्रा, सोच लायक छ। यो होस्टहरूको लागि सबै सुझावहरू छ। र सबै भन्दा पाल्तु जनावर के? आखिर, त्यहाँ आफ्नो जीवन भर गर्न प्रयोग गर्न सक्छन् जो जनावर र उपनामहरू छन्। हामी ध्वनि र संयोजन को धारणा ध्यान, एक बिरालो कल गर्ने बारे कुरा हुनेछ आज तत्संबंधी furry पशु हो।
क्रममा miscalculate र यो मात्र होइन तपाईं अवलोकन गर्न केही सामान्य नियमहरू तर उहाँलाई सुखद हुनेछ झैँ पाल्तु जनावर कल छैन। हामी एक सम्भव समझौता को सबै अवस्थामा विचार गर्नुहोस्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम नाम समावेश हुनेछ जो अक्षर, को सही चयन छ। तिनीहरूले नरम हुनुपर्छ र कान काटन छैन। र सही ध्वनि मिश्रण आफूलाई जनावर उच्चारण गर्न सम्बन्धित सम्झाउनुपर्छ। "माइल", "कुनै", "मिया", "nya", "आमा", "ला", "के", "शिविर", "आईपी", "बी" र जस्तै: यो निम्न शब्दांशहरू प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। अनुसार यो अवस्था संग बिरालो कसरी नाम? वास्तवमा, भिन्न धेरै। Masyanya, Masya, Mila, Millie, आइरिस, जेसी (राम्रो सुनिन्छ जेसिका भन्दा), टिम Ritchey, मेलिसा। रचनात्मक कल्पना, यहाँ सोच्न कुरा हो।
कसैले बिरालो राम्रो नस्ल र impeccable व्युत्पत्ति लागि नाम सरल हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। तर, बोझिल नाम पनि समस्या हुन सक्छ। तपाईं खाजाका लागि प्यार बिल्ली कल छन् कल्पना गर्नुहोस्। तपाईं त ध्यान दिएर उनको शानदार उपनाम pronouncing, भाषा तोड्न पाँच मिनेट उत्सुक हुनुहुन्छ? सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ दोहोरो नाम। एक पासपोर्ट मा दर्ता गरिनेछ र टाँका को कुनै पनि नम्बर लाग्न सक्छ। दोस्रो विशेष गृह र साँघुरो परिवारमा लागि डिजाइन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, राम्रो तरिकाले मूल मेटिल्डा Motya गर्न गिर सक्छ।
यसलाई आफ्नो बाह्य सुविधाहरू अनुसार बिरालोहरु को नाम दिन महत्त्वपूर्ण छ। यो आवश्यक छैन platitudes गर्न सहारा र Ryzhik Chernyshkov टाइप गर्न छ। यहाँ केही थप रोचक विकल्प हो: ब्लूबेरी, ब्रोच (आफ्नो छाती मा बिरालो एक दाग छ भने), Dickey (मनीष), ट्याग, (धर्काहरू र विभिन्न रंग को दाग संग बिरालोहरु लागि ठूलो) graffiti, Domino (कालो-र-सेतो छलावरण लगान को लागि) मोइर।
हालै एक बिरालो कल गर्न कसरी को प्रश्नको जवाफ मालिकको, थप र थप कहानी तल्लीन गर्न थालेका छन्। एकदम अक्सर तपाईं यस्तो Freya (Frey), हर्कुलेसक्लस्टर, गोल्यतलाई, दाऊद Aphrodite रूपमा नाम पाउन सक्नुहुन्छ।
को कल गुणस्तर र एकै समयमा मूल उपनाम कुनै पनि देश को मुद्रा को नाम कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। के गलत हो, भन्छन्, Dukat, Doubloon, डलर, Gulden, फ्रैंक जस्तै एक विकल्प? पनि यूरो तपाईं निर्देशिका नाम विश्वास भने, unnoticed भएन।
शैशवकालदेखि केही शारीरिक गुणहरू पहिले नै प्रकट भएको छ कि एक बिरालो कल कसरी? पोटिलो पशु एक हास्यास्पद उपनाम विश्व वा डोनट, एक विशाल राउन्ड टाउको संग बिल्ली लागि उपयुक्त छ जो दिन सक्छन्। उदाहरणका लागि, ब्रिटिश नस्ल को एक विशिष्ट प्रतिनिधि लागि। सक्रिय बिरालोको बच्चाहरुको नाम र Concertina shustriki गर्न सकिन्छ। निद्रामा को प्रेमी नरम moniker Morpheus स्वाद आवश्यक छ। मनोरम बिरालोहरु Siamese जातिहरु एकदम यस्तो मोडेल र रीड रूपमा नाम अनुरूप छन्।
एकदम बस नस्ल को नाम बाट सुरु। म जस्तो सिम-सिम र पीच नाम विशेष व्याख्या आवश्यक छैन लाग्छ।
Furry जनावर तुर्क, डोनट, Pysh, Mahrushka, मखमली, फाइबर जस्ता नरम र कोमल उपनाम टिप्न सबै भन्दा राम्रो छ।
र, अन्तमा, कसरी बिरालो "नाङ्गो" Sphynx नस्ल नाम? जवाफ एकदम अप्रत्याशित छ, तर हास्य को एक अर्थमा संग घर टोली पक्कै पनि टिप्पणी मा यो विकल्प लिन। पट्टी वा पट्टी - यो असामान्य पशु लागि मूल नाम छैन? हुनत, सुल्तान र राजकुमार / राजकुमारी (बिरालोहरु सामान्यतया राजसी र रीगल को बानी, पनि) (किनभने आफ्नो लगभग विदेशी उपस्थिति को) नाङ्गो थिएँ, मंगल जस्तै प्रजाति छन्।
कति प्रत्यक्ष योर्कशायर टेरियर्स बारेमा जान्न
माछा लागि नाम - चयन कसरी गर्ने?
कि घर र जंगलमा हेज हग खाने?
कला र वास्तुकला ग्राफिक्स मा प्रविधी केदारनाथ चित्रकला
Svetlana Hodchenkova। राम्रो अभिनेत्री को जीवनी र एक सुन्दर महिला
म किन के एक anagram थाहा गर्नुपर्छ?
क्षरण - सधैं खराब छ!
नुन संग जोडों को उपचार। जोडहरुको मा लवण को जम्मा: उपचार लोक उपचार